I-Cottage echibini laseGeorge
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKara
Yiza uphumle kwiLake George entle. Le cottage isanda kulungiswa yindawo nje yeholide oyifunayo. ILake George ikwiFairmont Chain of Lakes, ekunika ukufikelela kuzo zonke iintlobo zolonwabo emanzini. Ukuqubha, intlanzi, ukutyibiliza emanzini, inqwelo-moya yekhephu, nokuba leliphi ixesha lonyaka uya kulufumana uhlobo lwakho lolonwabo. Emva kosuku emanzini, phumla kwaye ubukele ukutshona kwelanga ukusuka kwipatio engasemva okanye ubethe kufuphi neendawo zokutyela zomculo ophilayo rhoqo ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku ehlotyeni.
IFairmont likhaya leepaki ezininzi ezintle, kwaye ipaki yaseLincoln yenzeka nje ukuba isecaleni komnyango. Lonwabele ibala lokudlala, iimbono ezintle zechibi, kunye neegadi zeentyatyambo ezithandekayo ngelixa uhlala nathi.
I-Cottage eseLake George ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane nedolophu yaseFairmont kwaye inokufikelela ngokulula kwiivenkile, iindawo zokutyela kunye nayo yonke into esi sixeko sihle sinokuyinikezela.
Umbuki zindwendwe ngu- Kara